N'ogbe ọrịrị Nzọụkwụ larịị CSA ANSI Kwadoo Multi nzube 5 Nzọụkwụ Single Side Faiba glaasi n'ọkwá Manufacturers na Suppliers | ABC
PFGH105 bụ 7 ft faiba glaasi n'elu ikpo okwu nke nwere 5 nzọụkwụ, elu oghere bụ 2020mm, mmechi elu bụ 2180mm, dịrị 13.3kg, gosiri ibu bụ 300 pound (136kg), ibu ọnụego bụ IA larịị. Nnukwu ikpo okwu ya dị obosara ma ghara ịdị na-amị amị, na-enye ebe nchekwa na nchekwa ọrụ maka ndị ọrụ. A na-eji rivets abụọ na ihe nkwado diagnostics iji mee ka ubube ahụ sie ike ka usoro ikpo okwu ahụ nwee ike izute ma ọ bụ gafere ụkpụrụ nchekwa nke ANSI na CSA setịpụrụ. Igwe fiberglass adịghị arụ ọrụ mgbe ọ dị nso na ọkụ eletrik, yabụ enwere ike iji ya na ọkụ eletrik. Fiberglass platform ladders adabara ọrụ ndị chọrọ ogologo oge iguzo n'ebe dị elu, nnukwu ikpo okwu ha agaghị eme ka ike gwụ ndị mmadụ.
1. siri ike 300 lb. ibu ikike nzọụkwụ n'ọkwá nke kacha arụpụtaghị
2. A nnukwu gapless na-abụghị ileghara guzo n'elu ikpo okwu maka ala guzo
3. guardgbọ okporo ígwè nchebe na-agba ume ka o guzosie ike
4. Ugboro abụọ riveted ileghara na-eguzogide nzọụkwụ ewu
5. Edge nkwado maka ụgbọ okporo ígwè
6. lipkwụ na-eguzogide roba na-eme ka ọ kwụsie ike
7.This bụ otu-kwadoro faiba glaasi n'elu ikpo okwu n'ọkwá na ike ga-eji na ọkụ eletrik
Kedu ihe dị iche n'etiti usoro PFGH10 * na usoro FGHP10 * S?
Anyị iko eriri podium ladders abụọ usoro, PFGH10 * na FGHP10 * S. Ntube ibu nke usoro abụọ a bụ ụdị IA, na ikike ibu bụ 300lbs (136kg), ha abụọ jikọtara ya na rivets abụọ na usoro nkwado diagonal. Ya mere, usoro isiokwu abụọ a hà bụ otu? Ọ bụghị n'ezie. Ọ bụrụ na i leruo anya nke ọma, ị ga-ahụ na elu ha dị iche. Enwere oghere ngwaọrụ n'elu FGHP10 * S, ma nwee ike itinye ọtụtụ ngwaọrụ na ya. Nwere ike mezue ọrụ ahụ n'onwe gị n'enweghị enyemaka nke onye ọzọ iji nweta ngwaọrụ. PFGH10 * enweghị oghere ngwaọrụ, yabụ, mgbe ịchọrọ ịgbanwe ngwaọrụ ugboro ugboro n'oge ọrụ gị, ọ kachasị mma ịchọta onye inyeaka.
Nke gara aga: 40 nzọụkwụ faiba glaasi ndọtị n'ọkwá FGEH40
Osote: Hot Sale Fechaa faiba glaasi mkpuchi Single-kwadoro Nzọụkwụ larịị
FGHP103S 300lbs ibu ikike faiba glaasi platfo ...
Shelf maka ulo Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Obere Nchekwa Obere Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Ogbe shelf Ime ụlọ ime ụlọ